Chii chandinofanira kuziva pamusoro peEO backlinks yekuvaka webhusaiti yangu?
Unoziva here nei kumashure kwakakosha zvikuru muSeO? Dambudziko nderokuti vanhu vakawanda vanoziva nehurukuro yehutano hwehutano hwehutano vanotenda kuti vari kungobatsira pakuita chisarudzo chekupedzisira cheGoogle pamusoro pekupa zvikwereti zvekutsvaga nzvimbo - yewebhu rese, webhubhu, nezvimwe.Ichokwadi, mazano akadaro anonzwisisa. Izvozvi, zvisinei, zvidzidzo zvenguva pfupi zvakagadzirisa zvakare kuti webhusaiti yega yega inowanikwa yakawandisa maitiro (kana zvisina kudaro, pamusoro peSeO backlinks) ndeyechokwadi pakati pezvinhu zvitatu zvakakosha zvikuru zvinofungidzirwa neGoogle zvakanakisa kutsvaga shanduro yekugadzirisa.
Zvechokwadi, kukosha kwakakosha kwemashure ekudzokorora kwakanaka kunozivikanwa nevose vanobatanidzwa mumabhizimisi ekutsvaga kutsvaga. Asi iye zvino maitiro avo ekupedzisira ave akasimba kupfuura kare kare - ndicho chikonzero nei iwe uchifanira kuziva zvose pamusoro peshoko reEO topl backlinks, SEO equity, backlink equity uye link juice - bars-plus. Kuti ndikupe mufananidzo wakazara weSearch Engine Optimization uye web links, ini ndichatanga nemamwe mazwi echirevo.
Chii chinoita pfungwa yepamusoro yeSeO backlinks?
Kutanga, izwi rokuti "backlink" rinomiririra kuwanikwa kwekubatanidza kubva kunewechitatu webhusaiti, bhulogi, kana zvimwe zvimwe zvepaIndaneti zvinowanika paIndaneti. Zvadaro, shoko rokuti "kumusoro" rinotsanangura chimiro chakasimba kana kunaka kwehutano hwemashure - kubva pakuona kweSEO. Mushure mezvose, shoko rokuti "SEO" rinoreva kuti mabhidhiyo akadaro anokonzera kutsvaga injini yekutsvaga - kana mune zvakanaka-zvakaipa, kana zvakanaka-negative, uye dzimwe nguva kunyange munzira isina kwaakarerekera. Ichokwadi, kunyatsoita kwemashure endangariro mu SEO kazhinji kunobva pane zvakagadzirwa zvezvinhu zvikuru uye pfungwa dzinokurukurwa pasi apa.
Ngatifungei pasi rose paIndaneti sehurongwa hwepasi rose hwakaumbwa nemamwe masayiti akabatanidza nemapeji ewebhu. Uye zvinhu zvose zviri kufamba ipapo - zvinyorwa zvewebhu zvinoramba zvichiramba zvichiwanikwa nekuwedzera kwevashandisi - vakawanda uye vari kuwedzera kushandisa iko, kushandisa, kugovana, nekubatanidza nayo. Nenzira iyo, webhusaiti yega yega, nebhubhu inoonekwa inobatanidzwa mukugadzirisa kwekugadzira nekuparadzira huwandu hwepamusoro pepaji, PageRank, uye chiremera chinzvimbo.
SEO kuwanika kwewebsite yako kunowedzera kunyoreswa yehuwandu hwehuwandu hwaro hwekugarisa - hwakaitwa nehuwandu hwenzvimbo uye hukuru hwemasimba, hwakatsigirwa nesimba rinosanganiswa reSOO rekudzokera shure. Kuiisa mu pachena Chirungu, SEO equity iyo webhusaiti yako inokwanisa kukwirira zvakanaka paGoogle SERPs. Ndizvo.
Link joice (a. k. a. link equity) inowanzoonekwa nenyanzvi dzekugadzirisa se "subset" yehuwandu seOO equity. Kana ndiri ini, ndinoziva pfungwa yekubatanidza juice sezvo "chiyero" che SEO chikamu chekugoverwa kana mapeji maviri akasiyana akabatanidzwa pamwechete. Saka, kubatanidza jisi ndiko kuyerera kweEO equity - kutumidzwa kubva kune webhusaiti yejeri uye kupfuurira kune chinangwa chekuenda.
Pashure pezvose, heino nheyo yepfungwa yepamusoro yeEOO backlinks. Muzvinyorwa, mazwi ose ekutanga anotaurwa (i. e. , SEO kuenzaniswa, kubatanidza kuenzaniswa uye juice inogadzirwa) inotungamirirwa neSeO community - kungoziva kuti Google inoshanda sei. Ichokwadi, iyo ndiyo mutauro wekugadzirisa kwemazuva ano, kwete Google search injini. Mumashoko akajeka, zvose maGoogle pachavo, uye webmaster yayo Academy havana kumbobvira vapa chero zvakanyatsotarisana nezvenyaya iyi yakaoma. Saka, ndinotarisira sumo yangu shoma pamusoro peEOO backlinks inogona kukubatsira iwe, kuti uve nechokutanga chekutanga chekufamba kwako kwakaderera munyika yose yeSearch Engine Optimization.